विप्लव पुत्र प्रकाश भन्छन्, ‘यो कस्तो खालको राज्य हो ? | Ratopati
मेडिकल शिक्षा आन्दोलन
विरगञ्जमा रहेको नेश्नल मेडिकल कलेजको वातावरण हेर्दा यस्तो लाग्छ यो नेपाल हैन जस्तो लाग्छ । त्यहाँ पुगिसकेपछि तपाईले आफूलाई नेपाली अनुभूति गर्न सक्नुहुन्न । यो अवस्थामा एउटा मन्त्रालयको निर्णयले मात्रै यत्रो शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न संभव छैन । यो हाम्रो सिधा कुरा छ । त्यसकारसण विद्यार्थीहरुले जुन यो आन्दोलन गर्नुभएको छ । यसमा गृहप्रशासन र शिक्षा मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेर विद्यार्थीसँगै मेडिकल माफियासँग पुग्ने, मेडिकल माफियासँगै विद्यार्थीलाई राखेर निर्णय गराउन सकियो भने एउटा हिसावले अगाडि जाला हैन भने त्यो निर्णयमा पनि शंका गर्ने ठाउँ बन्छ ।
किनभने निर्णय गरिसकेपछि निर्णय कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर नियमन गर्ने त त्यही मन्त्रालयले हो नी ? त्यो नभइसकेपछि सायद ती निर्णयहरु पनि वार्गेनिङका लागि मात्रै हुन कि ? सायद ती निर्णयहरु यी आन्दोलनलाई स्खलित गर्नका लागि मात्रै हुन कि भन्ने शंका विद्यार्थीलाई लागेको छ । तर पनि त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामी हरसंभव आन्दोलनका लागि सडकमा छौँ, संघर्ष गर्दैछौँ । जस्तोसुकै बलिदान दिन पनि तयार छौँ । यही संघर्षमार्फत ती निर्णय कार्यान्वयन गराउछौँ ।
समस्या समाधान भन्दापनि समस्यालाई एउटा टुङ्गोसम्म लगिएको छ । तर कार्यान्वयन भएको छैन । कार्तिक १८ गतेसम्म बढी लिएको भर्ना शुल्क फिर्ता गर्ने सहमति भएको हो । शुल्क कि फिर्ता कि समायोजन हुनुपर्छ भनेकोमा त्यो काम गरिएको छैन । १८ गतेसम्म भएन भने फेरी हामी संघर्षमा गइहाल्छौँ ।
अरु मेडिकल कलेजहरुको अवस्था कस्तो छ ? तोकिएको शुल्क लिनुपर्ने सरकारको निर्णय उनीहरुले कार्यान्वयन गरेका छन् कि छैनन् ?
अरु मेडिकल कलेजहरुको अवस्था पनि ठ्याक्कै यही हो । तर अरु मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुमा अझै चेतनाको विकास भइसकेको छैन । त्यसका लागि समय लाग्छ । तर हामीहरुले साथ दिने त प्रयास गरिरहेका छौँ । मेडिकल कलेजहरुमा जानुपर्छ र त्यहाँ विद्यार्थीहरुलाई सम्झाएर सडकसम्म ल्याउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म मानेको छैन । डिन कार्यालयले मानेन भने आफै असफल हुन्छ । उहाँहरुको त माफियाहरुसँग साँडगाँठ छ । माफियाहरुको दवावमा गर्नुभयो भन्ने खुलस्त हुन्छ । यसलाई हामी डिनको असफलताको संज्ञा दिन चाहन्छौँ । डिनले एकलौटी हिसावले लादेको कुरालाई हामी मान्दैनौँ । त्यसलाई अवज्ञा गर्छौँ र विद्यार्थीले यही किसिमको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँछन् ।
#मेडिकल कलेज# प्रकाश चन्द